Baarlamaanka Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo Heshiis kala saxiixday
November 27, 2017 - Written by Editor
Muqdisho:-Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay heshiis ku kala saxiixa nayeen baarlamaanada Soomaaliya iyo kan Dalka Jabuuti,kaasi oo ku dhisan wadashaqeyn iyo walaaltinimo. Kulanka waxaa goob joog ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuri yadda Soomaaliya Federaalak Soomaaliya Mudane Maxmed Sh.Cusmaan Jawaari, guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare ahna kusimaha guddoomiyaha Abshir Axmed Maxmed (Bukhaari),guddoomiyaha Baarlamaanka Dalka Jabuuti Maxmed Cali Xumud iyo xubno xildhibaano ah.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Abshir Maxamed Axmed ‘’Abshir Bukhaari’’ ayaa sheegay in xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti uu yahay mid ku dhisan walaaltinimo.
Waxaa kulanka intii uu socday la isku la soo hadal qaadey muhiimadda ay leedahay wadashqeynta iyo walaaltinimada barlamaanada labada dal ,iyadoo la ammaanay dowrka Jabuuti ay ku leedahay taageerada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Qaranka ee Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Maxamed Cali Xumad ayaa sheegay in qodobada heshiiskan ku qoran sida ugu dhaqsiyaha badan u hir gelin doonaan.isagoona bogaadiyay xoojinta xiriirka labada wadan.
Guddoomiyaha Golaha shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed iyo Dowladooda aysan marnaba iloobi doonin abaalkii ay u galeen shacabka reer jabuuti iyo dowladooda ,sidoo kalana Baarlamaanka Soomaaliya ay ka go’antahay xoojinta wada shaqeynta Baarlamaanka walaalaha Jabuuti
230,667 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress